“America First” has been the resounding refrain in Donald Trump’s first month in office, and the U.S. president’s nationalist tendencies have found an ally in Zimbabwe’s President Robert Mugabe. Mugabe, who turns 93 Tuesday and is Africa’s oldest serving head of state, told state broadcaster the Zimbabwe Broadcasting Corporation that he
This past week, the Minister of Local Government, Savior Kasukawere, made a statement in which he claimed that maladministration by MDC led Councils had cost 500 lives in the past few months. I found this laughable when compared to what this government has cost us in lives, income and welfare
By Andrew Mambondiyani MPUDZI, Zimbabwe (Thomson Reuters Foundation) - After a year of paralyzing El Nino-induced drought, Zimbabwe’s farmers have been relieved to receive substantial rain in recent weeks, with normal to above-normal rainfall predicted for the new growing season. But for a share of poor farmers, the rains are not enough
In a direct challenge to government policy the opposition party Democratic Alliance (DA) in South Africa has taken the government to court in a bid to stop South Africa's withdrawal from the International Criminal Court (ICC) headquartered in the Hague. The DA is contending that parliamentary consent is required as
Zimbabwean veteran politician Dumiso Dabengwa has said that removing PresidentRobert Mugabe and his Zanu-PF party alone would not be enough in getting the country back on track, reports NewsDay. Dabenga, who is the leader of the opposition Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) party, said that Zimbabweans should also fight against